🍁 BEAU VAN : chic eco amava oxolo 🍁 - I-Airbnb
🍁 BEAU VAN : chic eco amava oxolo 🍁
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguMichelle
UMichelle unezimvo eziyi-65 zezinye iindawo.
Isitayile esinoxolo se-bohemian ikhaya elincinci elibekwe kwindawo yasemaphandleni. Ngokukhethekileyo bhukisha nge-Home Away. Isitayile se-Eco simnandi ukubaleka kuyo yonke into. Umbono omangalisayo wesibhakabhaka sasebusuku kunye nazo zonke iimod cons onokuthi uzifune. Igadi ye-Organic kunye negadi ezingqongileyo. Nceda kungabikho maqela okanye umculo ongxolayo. Umnini kunye neendwendwe ezikufutshane. Uxolo olunoxolo ngumxholo.
I-Bohemian Retreat yikharavani yakudala yakudala enkulu ehlaziywa ngothando ngokuziva kamnandi kwaye okwahlukileyo. Ibhedi yabantu ababini, ukutya ekhitshini, indawo yokufunda, itafile yangaphandle enezitulo kunye neseti yangaphandle, ibbq, kunye neserate rustic eco loo kunye neshawari, iwifi, iNetflix, iBluetooth speaker (akukho tv yorhwebo). Zonke ilinen zinikezelwe (ngaphandle kweewasha zobuso). Ipropati kufuneka ishiywe icocekile njengoko uyifumene. I-200 yeedola zokhuseleko kunye nediphozithi yokucoca ethathwe ngaphambi kokufika. Nceda ufunde nemithetho yendlu.
I-2 1/2 km ukusuka kwilokishi yaseCoonabarabran kwaye malunga neekhilomitha ezingama-20 ukuya ezintabeni kunye neObservatory. Sisitalato esizolileyo kakhulu.
Iindwendwe zishiywe kwizixhobo zazo ngaphandle kokuba kukho umbuzo okanye umba ngexesha onokuthi usithumelele ngalo umyalezo ngeqonga lakho lokubhukisha okanye iapp. Uya kusibona sibumba kwipatch yemifuno.